नारायणहिटी हत्याकाण्डका प्रत्यक्षदर्शी भान्सेद्वारा सिंहदरबारभित्र आत्महत्या « Naya Page
प्रकाशित मिति : 21 August, 2019 6:32 am
काठमाडौं, ४ भदौं । १९ जेठ ०५८ मा भएको राजदरबार हत्याकाण्डका प्रत्यक्षदर्शी बच्चुराम केसीले विष सेवन गरी सिंहदरबारमा आत्महत्या गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुब्बा तहमा कार्यरत केसी मंगलबार दिउँसो कार्यालयमा मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् । राजदरबार हत्याकाण्डका वेला केसी युवराज दीपेन्द्रको बासस्थानका रूपमा रहेको त्रिभुवन सदनमा ब्वाइज (सुब्बा) पदमा कार्यरत थिए र उनको जिम्मेवारी भान्सेका रूपमा थियो ।
त्यसैक्रममा उनले गरेको गल्तीले उनलाई मंगलबार बिहान आत्महत्याको स्थितिमा पु¥यायो । राहदानी विभागमा कार्यरत छँदा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता र राहदानी दिने गिरोहको लहैलहैमा लागेर केसीले १७ जना बंगलादेशीलाई नेपाली राहदानी दिलाएका थिए । यही विषयमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सबैभन्दा पहिला युवराजधिराज सवारी होइबक्सेको थियो बैठकमा । त्यसपछि महेशकुमार सिंह साहेबज्यू सवारी भयो । त्यसपछि अरू साहेबज्यू सवारी होइबक्स्यो । घटना घट्नुभन्दा दुई मिनेटअघि म कोल्डड्रिंक्स लिएर गएको थिएँ ।
त्यहाँबाट फर्केर अलि वर बैठकको ढोकाको १० मिटर जति उत्तर साइडमा पुग्दा युवराज सरकार आर्मीको चुस्ता डे«समा सवारी होइबक्स्यो । अगाडि गन भिरिबक्सेको थियो । त्यसवेलासम्म मैले उभिएर हेरिरहेको थिएँ । कतै सवारी हुन लाग्यो भन्ठानें मैले । त्यसपछि ढोकाबाट छिर्नेबित्तिकै फायरिङ सुरु गरिबक्स्यो । त्यसपछि मलाई डर लाग्यो । मेरा मुटु काम्यो । म बाहिर भागेँ ।
अरू कुरा केही देख्नु भएन ?
युवराजलाई तपाईंले देख्दा हतियारसहित नै देख्नुभएको थियो ? कति वटा हतियार थिए ?
दुई वटा त हातमा तेस्र्याएको देखेको थिएँ । एउटा टल थियो, अर्को अलिकति सानो थियो ।
दुई वटा उस्तै–उस्तै साइजको झुण्ड्याएको देख्नुभयो कि कस्तो थियो ?
कस्तो हाउभाउ देखाउँदै आउनु भएको थियो ?
होइन उभिएरै आउनु भएको थियो ।
फायरिङ कसलाई भएको देख्नु भयो ?
त्यहाँबाट भित्र देखिँदैन । म बसेको ठाउँबाट फायरिङ भएको मात्र देखिन्थ्यो । कसमाथि फायरिङ भयो देखिएन । मलाई सानु प्रभूले (निराजन साहेव) ले कोल्ड ड्रिंक्स ल्याऊ भन्ने हुकुम भएकोले कोल्ड ड्रिंक्स लिएर गएको थिएँ ।
विलियार्डकै असपासमा होइबक्सन्थ्यो । म त्यहाँ डाइरेक्ट गएँ । कोल्ड ड्रिक्स त्यहाँ राखे । त्यहाँ बस्नु थिएन । त्यस्तो आवश्यक परेमा घण्टी बजाइबक्सन्थ्यो वा कहिलेकाहिँ आफैँ किचेनमा सवारी होइबक्सन्थ्यो । यो चीज लेऊ भन्ने हुकुम हुन्छ । त्यही अनुसार जान्छौं । त्यहाँ कुनै फिर्ता ल्याउनुपर्ने चीज भए ल्याउँछौं, फर्कन्छौं ।
मैले घडी त हेरिनँ । तर अन्दाजी त्यही ९ बजेको थियो की जस्तो लाग्छ । त्यसबेला हामी ३ जना मात्र थियौं काम गर्ने । तीन जनाले सबै भ्याउनुपर्ने हुन्छ । टेन्सन हुन्छ । त्यसैले ओहोरदोहोर गरिराख्नु पर्ने हुन्छ । समय हेर्न मौका समेत मिल्दैन । नयाँपत्रिका दैनिकबाट
विभिन्न मुलुकबाट १६ हजार २९४ नेपालीको उद्धार, कुन प्रदेशका कति ?
ओली–प्रचण्ड निर्णायक वार्ता सकियो, निस्किएन निष्कर्ष, अबको बाटो के ?
रोशीमा खानेपानी आयोजनाको काम हुँदै
बाजुरा, २१ असार । बाजुरामा शुक्रबार रातिदेखि लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण बाउली खोलाले ठूलो
काठमाडौं, २१ असार । दुई एयरलाइन्सले विभिन्न मुलुकबाट दैनिक औसत पाँचदेखि छवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरी
काठमाडौं, २१ असार । पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउनका लागि अन्तिम प्रयास भनिएको आज (आइतबार) को नेपाल